Windows 10 တွင် recovery drive ကိုဖန်တီးပါ
နေအိမ်/ညွှန်ကြားချက်/Windows 10 တွင် recovery drive ကိုဖန်တီးပါ
ညွှန်ကြားချက်Windows ကို 10
Vangelis12 ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2016
Recovery drive ဖြင့်ဖန်တီးပါ Windows ကို 10မရ။ ယနေ့ခေတ်တွင်၊ Windows 10 ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောကွန်ပျူတာ (သို့) laptop တစ်လုံး ၀ ယ်သောအခါ၊ ယခင် DVD DVD တစ်ခုမှမရှိတော့ပါ။ ထုတ်လုပ်သူများသည်၎င်းအတွက် hard drive ပေါ်တွင် recovery partition တစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။ ထို့ကြောင့်ဤ recovery partition မှ USB recovery drive တစ်ခုဖန်တီးရန်အကြံပြုသည်။
သင်၏ PC တွင်ပြဿနာများရှိနေလျှင် USB ပြန်လည်စတင်သည့် drive သည် PC ကိုမစရင်တောင်ထိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ ဤပြန်လည်ထူထောင်ရေး disk ကိုဖန်တီးရန်သင် Windows 10 ကိုသုံးနိုင်သည်။ အဲဒါကပြီးပြီ။
USB ပေါ်မှပြန်လည်ထူထောင်ရေး drive ကိုဖန်တီးပါ
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး drive တစ်ခုဖန်တီးရန်အနည်းဆုံး USB 16 GB ရှိရန်လိုသည်။ USB ပြန်လည်ထူထောင်ရေး drive ကိုဖန်တီးခြင်းသည် data အားလုံးကိုဖျက်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်အလွတ်ဖြစ်နေသင့်သည်။
ဝင်ပါခင်ဗျာ ရှာဖွေရေးအကွက် Windows 10 မှ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင် ရလဒ်ကိုနှိပ်ပါ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး drive တစ်ခုဖန်တီးပါ
PC တွင် recovery partition မရှိလျှင် check box သည်မီးခိုးရောင်ဖြစ်သည်။ ထားပါတော့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိရိယာများနှင့် bootable ပုံတစ်ခုသာပါ ၀ င်သည်။ (Microsoft)
USB stick မှာရွေးပါ ရနိုင်သော drive များ
မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ recovery partition ကိုသိမ်းထားချင်ရင်ကလစ်ပါ ပြီးမြောက်သည်.
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး partition ကို compiter မှဖယ်ရှားရန်နှင့်သိုလှောင်ရန်နေရာရရှိရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုလည်းရှိသည်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ ပြန်လည်နာလန်ထူ partition ကိုဖျက်ပစ်ပါ.
Recovery Drive သို့ boot - Recovery Drive ကိုသုံးပါ
ယူအက်စ်ဘီ- ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင် အသုံးပြု၍ စတင်ရန်၊ သင် BIOS ရှိ boot order ကိုပြောင်းရန်လိုသည်။ (ငါတို့က bios ထဲကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာဒီမှာရှင်းပြမယ်)
software ဖြင့် system ပြန်လည်ရယူခြင်း
သင်ပိုလုံခြုံချင်လျှင် EaseUS or ကဲ့သို့သော third-party program များကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် Acronisမရ။ ၎င်းသည်သင့်အားလက်ရှိ system image ကိုဖန်တီးပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း Windows သို့ပြန်ပေးနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် Win 10 မှာ recovery drive ကိုသုံးသလား
တက်ဘလက်မုဒ်ကိုဖွင့်ပါ - ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
Windows 10 စကားဝှက်သတိပေးချက်အသစ်ကိုပိတ်ပါ။
Windows 10 ဗားရှင်း ၁၉၀၉ အင်္ဂါရပ်အသစ်များ။
Windows 10 တွင် DVD drive များပျောက်ကွယ်သွားသည်
ပျက်စီးသွားသော Excel ဖိုင်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပြုပြင်ပါ
ပရိုဖိုင်ကို တင်၍ မရပါ - Windows login ကိုပြုပြင်ပါ
Windows 10 update ကိုအရှိန်မြှင့်ပါ
Windows 10 အောက်ရှိ WiFi စကားဝှက်ကိုပြပါ
Amazon စာမျက်နှာများကိုဤစာမျက်နှာတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ Amazon မိတ်ဖက်တစ် ဦး အနေနှင့်သင်နှင့်သက်ဆိုင်သော Amazon link တစ်ခုကိုနှိပ်လျှင်အရည်အချင်းရှိသောအရောင်းအ ၀ ယ်မှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။
ယူအက်​​စ်ဘီ Windows ကို ပြတင်းပေါက် 10
Facebook က တွစ်တာ အိတ် WhatsApp ကို ကွေးနနျးစာ Viber ကို အီးမေးလ်ဖြင့်မျှဝေပါ နှိပ်ရန်
ကျွန်ုပ်သည် windowspower.de ၏ပိုင်ရှင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲသူ Vangelis ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စိတ်အားထက်သန်သော Windows fan တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူ windowspower.de ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော Windows ပြသနာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်များပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ windowspower.de တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်များကကူညီလျှင်ကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်ရွှင်သည်။
bootable USB stick Windows 11 ကိုဖန်တီးပါ
လွန်ခဲ့သော ၁ ပတ်က
Windows အောက်ရှိ hard disk ၏အမှတ်စဉ်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ မော်ဒယ်၊ firmware ကိုပြပါ
TPM ချစ်ပ်လက်ဆောင်လား။ စစ်ဆေးရန်နည်းလမ်း ၃ ခုရှိသည်
24 ။ သြဂုတ်လ 2021
ဤပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အချက်အလက်များသိုလှောင်ခြင်းနှင့်စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းကိုသင်သဘောတူသည်။ ပိုများသောသတင်းအချက်အလက်များအတွက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် အချက်အလက်များအားကာကွယ်ခြင်း။ *
Facebook က တွစ်တာ WhatsApp ကို ကွေးနနျးစာ
သာမရှိမဖြစ် cookies တွေကို Accept
တစ် ဦး ချင်းဒေတာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆက်တင်
ကွတ်ကီးအသေးစိတ် သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ နှိပ်ရာ
ဤနေရာတွင်သင်အသုံးပြုသော cookies အားလုံး၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သင်သည်အမျိုးအစားတစ်ခုလုံးကိုသင်၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုပေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပြသနိုင်ပြီးအချို့သော cookies များကိုသာရွေးချယ်နိုင်သည်။
ပြန်. သာမရှိမဖြစ် cookies တွေကို Accept
မရှိမဖြစ်ကွတ်ကီးဆိုဒ်၏သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကို enable ။
cookie ကိုအချက်အလက်တွေကိုမြင်တွေ့ cookie ကိုသတင်းအချက်အလက် Remove
Borlabs cookie ကို
ဒီ site ၏ပိုင်ရှင်များ
Borlabs cookie ကိုကနေ cookie ကို box ထဲမှာကိုရှေးခယျြခဲ့ကြသူဧည့်သည်၏ setting ကယ်တင်တော်မူ၏။
စာရင်းအင်း cookies များသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအမည်မဖော်ဘဲစုဆောင်းသည် ဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်များကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။
Google က LLC
ဝဘ်ဆိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် Google cookie ။ the ည့်သည်သည် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမည်သို့အသုံးပြုသည်ကိုစာရင်းအင်းအချက်အလက်များထုတ်ပေးသည်။
ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းများနှင့်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများမှအကြောင်းအရာကိုပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည် ပြင်ပမီဒီယာမှ cookies များကိုလက်ခံပါက၊ ဤအကြောင်းအရာကိုလက်လှမ်းမီရန်လက်စွဲသဘောတူညီချက်မလိုအပ်တော့ပါ။
Host က (s) ကို
အသုံးပြုသော Google Maps ကိုအကြောင်းအရာသော့ဖွင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
_osm_location, _osm_session, _osm_totp_token, _osm_welcome, _pk_id ။ , _pk_ref ။ , _pk_ses ။ , qos_token
YouTube ကို content တွေကိုဖွင့်ရန်အသုံးပြုသည်။